भगवान गणेशकाे नाम लिदै पढ्नुहाेस – Sadak Media
भगवान गणेशकाे नाम लिदै पढ्नुहाेस
जुनसुकै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा पनि दुविधामा पर्ने हाम्रो चलन रहेको छ । पछि नराम्रो हुने हो की ? कतै नयाँ काम गर्दा ढुबिने पो होकी ? भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको हुन्छ । तर प्राचिन भारतका बुद्धिमानी, चतुर र प्रसिद्ध अर्थशास्त्री समेत रहेका चाणक्यले अपनाएका नितिले अहिले विश्वभर चर्चा पाएको छ ।
१.तीन सोच : कुनै काम गर्नु अगाडी मनमा काम कसरी गर्ने, कुन समयमा गर्ने, कुन स्थान राम्रो हुन्छ सम्पत्ति र समर्थन गर्ने कति छन् भन्ने कुराको बारेमा जानकारी पाउनु जरुरी रहेको छ ।२.क्षमताको लेखाजोखा : काम गर्ने क्षमता कति छ भन्ने लेखाजोखा काम गर्नु अगाडी नै राख्नुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने खतरामा पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । ३.जिभ्रोमा नियन्त्रण : नयाँ कामबाट सफलता पाउने की असफलता भन्ने कुराको निर्धारण जिब्रोले गर्छ । जति मिठो बोल्यो त्यति धेरै फाइदा हुन्छ ।
४.दुश्मनलाई साथी बनाउने : दुश्मनसँग पनि राम्रो व्यवहार गरियो भने असल साथी बन्न सकिन्छ । यदि तपाईले दुश्मनलाई पनि साथी बनाउन सक्नुभयो भने सफलताबाट कसैले रोक्न सक्दैन् ।५.शरीरको हेरचाह : भगवानले दिएको उपहार शरिरलाई कुनै नयाँ काम गर्नुपूर्व आफु कति स्वस्थ छु भन्ने कुराको बारेमा जानकारी लिनु महत्वपूर्ण रहेको छ । ६.ज्योतिषीसँग परामर्श : कुनै पनि काम सुरु गर्नु अगाडी ज्योतिषसँग सल्लााह लिनु पर्छ ।
७.पत्नीसँग सल्लाह : विवाहित पुरुषले कुनै पनि काम गर्नु अगाडी श्रीमतीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । किनकी उनी जीवन संगीनी हुन उनले कुनै पनि काम गर्न राम्रो सल्लाह सुझाव दिने गर्छिन् । ८.रहस्य लुकाउनुस् : कुनै काम सुरु गर्नु अगाडी आफ्नो विचार कसैसँग बाढ्नु हुँदैन् । यदि तपाईले आफ्नो योजना अरुलाई सुनाउँदा कहिल्यै सफल बन्दैन् । ९.अशिष्ट पनि बन्नुपर्छ : कुनै कामबाट सफलता पाउने अठोट लिएको छ भने त्यसको लागि कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । त्यसको लागि अशिष्ट व्यवहार गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणमा सवारी रुट परिवर्तन
चीनको चर्चित रियालिटी शो मा पुगे नेपालका सुजन श्रेष्ठ – भिडियो